Antsiranana ilay sambo nitondra fanampiana avy amin’ny governemanta Indianina entina hanampiana ireo traboina vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy. Fanampiana izay natolotry ny Ambasadaoron’i Inde, Atoa Abhay Kumar nahitana vary, fanafody, ronono, lamba firakotra sy fitafy ary kojakoja isan-karazany ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Santionany, hoy ity Ambasaodaro ity, ireo tonga ireo fa mbola misy ny fanampiana azo entina. Miankina amin’ny tena filan’i Madagasikara izany, hoy izy, indrindra fa ireo faritra izay tena voa mafy noho ny fandalovan’ny andro ratsy teo. Ankoatra izay dia mandray ireo olona rehetra mila fitsaboana ny “équipe médicale” ao amin’ity sambo ity, mandra-pialany eo amin’ny seranana. Ny Praiminisitra kosa dia mbola nanamafy hatrany fa hotsinjaraina araka ny tokony ho izy ireo fanampiana ireo ary nankasitraka ny fanomezan-tanana nataon’ny governemanta Indianina. Nandritra ity diany tany Antsiranana ity no nilazany fa tsy tokony hiandrasana ny fanjakana foibe ny fanatanterahana ny vinam-pampandrosoana fa mila mandray izay andraikitra sy adidy tandrify azy avy hatrany ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany. Nambarany fa maromaro ny fanarenana sy fanatsarana hotanterahin’ny fitondram-panjakana, toy ny Jirama, ny fametrahana orinasa mpamokatra fanafody eto Madagasikara, ny fonja vaovao isaky ny renivohi-paritany, ny “Centre d’Urgence” eny anivon’ny distrika, ny ivontoerana fanadiovana ra ho an’ireo marary voa, ny fametrahana “lycée de reference” ho an’ny zanaka Malagasy, izay efa manomboka ankehitriny, ny handraisana fepetra amin’ireo faritra voaaro, ny hamitana kianja manara-penitra ao Antsiranana sy ny fanatsaràna ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena,...